ပြည်သူ့စစ်ကို ဘယ်သူတာဝန်ခံသလဲ၊ ဘယ်သူတာဝန်ယူသလဲ – Nyang Media
MKC / (ဒေါ်) မိကွန်ချမ်း
ပြည်သူတွေရဲ့ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေက များများလာပါပြီ။ ကြာလာရင် ပြဿနာက တော်တော်လေးကြီးလာတော့မယ်။ အခုလည်းကြားနေရတာပဲ၊ သူတို့က …
ကျေးရွာများတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့များကို မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ထားရှိပြီး ၎င်းတို့၏ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်များကို မည်သည့်ဌာန အဖွဲ့အစည်းက တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမည်ကို သိလိုကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သော ပေါင်မြို့နယ် ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (ဒေါ်)မိကွန်ချမ်းအား ငြမ်းမီဒီယာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
ငြမ်းမီဒီယာ – (၁၁ . ၉ . ၂၀၁၉) ရက်နေ့က ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းကို မေးမြန်းသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီမေးခွန်းကို ဘာကြောင့်မေးဖြစ်တာလဲဗျ။
MKC – ကျွန်မတို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဆိုတာက အောက်ခြေ ပြည်သူလူထုနဲ့ အမြဲ ထိတွေ့ နေရတာလေ။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်မြို့နယ် အပြင် ကျွန်မငယ်ငယ်ကနေခဲ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာလည်း ဒီပြည်သူ့စစ်ဆိုတာကို သိနေခဲ့ပါတယ်။ အခု ကျွန်မမြို့နယ်မှာ တဖြေးဖြေးနဲ့ အရင်တုန်းကထက်ပိုပြီး ပြည်သူ့စစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတိုင်ကြားတာတွေ ရှိလာတယ်။ သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ ပြဿ နာတွေက အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ ကျွန်မအနေနဲ့ ဒီမေးခွန်းကိုမေးဖို့ ဖြစ်လာရတာပါ။ ကျွန်မတို့ဆီက ထန်းပင်ချောင် ကျေးရွာမှာ ပြဿ နာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီကိစ္စကို လွှတ်တော်မှာလည်း ထည့်ပြောပါတယ်။ ဖြစ်တာက အဲဒီပြည်သူ့စစ်ရဲ့သားနဲ့ ကျေးရွာကလူငယ်တွေဖြစ်ကြတာ။ လူငယ်ချင်းဖြစ်တာ ဆိုပေမယ့် လူကြီးတွေပါလာတဲ့အပြင် အဲဒီ ပြည်သူ့စစ်ဆိုတာက ဒီအပေါ်မှာသူ့ရဲ့အာဏာကို သုံးလိုက်တဲ့ သဘောမျိုးပေါ့နော်၊ သေနတ်ပစ်ဖေါက်တဲ့အထိ လုပ်လာတဲ့ အခါကျတော့ ဒါက တော်တော်လေးကို ပြည်သူတွေ အပေါ်ခြိမ်းခြောက် သလိုဖြစ်သွားပြီ။ အဲဒီအပေါ်မှာ ကျွန်မတို့က အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုကို ပြောတဲ့အခါကျတော့ ရဲကအဲဒီဟာကို အမှုမဖွင့်ပေးဘူး။
သေချာတိကျတဲ့ဥပဒေမရှိတော့ ဒီပြည်သူ့စစ်တွေကို ဘယ်လိုထိန်းကွပ်ကြမှာလဲ။ အဲဒီတော့ ဥပဒေနဲ့ ထိန်းကွပ်ဖို့လည်း လိုအပ်တယ်လေ။ မငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒေသတွေကျတော့ တပ်မတော် …
ကျွန်မတို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ တော်တော်ပြောမှ ဒါကြီးကို သူတို့ကအမှု လက်ခံပြီးတော့ အဲဒီအပေါ်မှာ စစ်တာက လည်း တိုင်တဲ့သူကိုပဲ ဆင်းစစ်နေပြီးတော့ အတိုင်ခံရတဲ့လူ၊ ကျူးလွန်တဲ့သူကိုကျတော့ ခုအချိန်ထိ ဘာမှအရေးယူ စစ်မေးဆောင် ရွက်တာမျိုး မရှိဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေအပေါ်မှာ ပြည်သူတွေရဲ့ စိုးရိမ် ထိတ်လန့် မှုတွေက များများလာပါပြီ။ ကြာလာရင် ပြဿနာက တော်တော်လေးကြီးလာတော့မယ်။ အခုလည်းကြားနေရတာပဲ၊ သူတို့က ဥပဒေမဲ့တွေချည်းပဲ လုပ်နေတဲ့အခါကျတော့လေ။ ကျွန်မတို့ဆီမှာ ချောင်းမြောင်းတွေကို မြေဖို့ပြီး မြေကွက်တွေ ရောင်းစား တာမှာ လည်း ဘယ်သူ့ဖြစ်ဖြစ် မေးကြည့်လိုက်ရင် ပြည်သူ့ စစ်နဲ့နွယ်နေတာ၊ ပြည်သူ့စစ်ပါနေတာချည်းပဲ။ ဒါမျိုးတွေပေါ့။ အဲဒါ ကြောင့်မို့လို့ ဒီဟာတွေကို ဘယ်သူက တာဝန်ယူသလဲ၊ ဘယ်သူက တာဝန်ခံသလဲဆိုတာကို ပြည်သူတွေ မသိကြဘူး။ ဒီအဖွဲ့ကို ဘယ်သူက တာဝန်ခံသလဲဆိုတာကိုပေါ့။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်မဒီမေးခွန်းကို မေးရတာ။ တကယ်တမ်းကျရင် ဒီပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့က မထိန်းကွပ်တာကြာလာတဲ့အခါ ပြည်သူကို အင်မတန်မှ အန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့ အခြေအနေထိဖြစ်သွားနိုင်တာကိုး။ အဲဒါကြောင့်ပါ။
ငြမ်းမီဒီယာ – မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်က ဖြေကြားသွားတာကိုရော စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်မှု ရှိပါသလားခင်ဗျား။
MKC – ကျွန်မ ကျေနပ်တာ မကျေနပ်တာထက် ပြည်သူကတော့ စိတ်ကျေနပ်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့ မထင်ဘူး။ ပြည်သူက အရေးကြီး တယ်လေ။ သူတို့သိချင်တဲ့အဖြေနဲ့ကတော့ ကွဲလွဲမှုရှိနေတယ်ဆိုတာ၊ ဖြေသွားတာကလည်း တစ်တိုင်းပြည်လုံးမဟုတ်၊ အကုန်လုံး လည်း သိကြပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ ဖြေသွားတဲ့ဟာက ကျွန်မမေးတာကတခြား၊ ဖြေသွားတဲ့ဟာကတမျိုးပေါ့လေ။ ဒီဖြေတဲ့အဖြေကိုတော့ အားရမှုမရှိဘူးပေါ့နော်။ အဲဒီလိုတော့ ပြောချင်ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကို ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒေသတွေမှာရော၊ မငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒေသတွေမှာပါ ထားရှိဖို့ လိုအပ်တယ်၊ မလိုအပ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလည်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အမြင်နဲ့သုံးသပ်ပေးပါဦး။
MKC – ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ ဒီပြည်သူ့စစ်ဆိုတာကို ဟိုးအရင် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်က စဖွဲ့စည်းခဲ့တာ။ အဲဒီအချိန်က ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းအခုလက်ရှိလို အင်အားမျိုး၊ အခြေအနေမျိုးမဟုတ်သေးဘူး။ အဲဒီတုန်းက နယ်မြေမအေးချမ်းတာရယ်၊ ကျွန်မတို့တပ်မတော်အနေနဲ့ကလည်း နေရာတိုင်းမှာတပ်စခန်းတွေ မထားနိုင်သေးတာရယ်ကြောင့် ဒီပြည်သူ့စစ်ဆိုတာကို ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ လုံခြုံရေးအနေနဲ့ အဲဒီတုန်းက ဖွဲ့ထားခဲ့တာ။ ဒါက ပြောရရင် ယာယီဖွဲ့ထားခဲ့တဲ့ သဘောမျိုးပေါ့နော်။
ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ သွားနေတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုမှာ တော့ ဒီဟာမျိုးကို မထားသင့်တော့ဘူလို့ ကျွန်မမြင်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အခြေခံဥပဒေထဲမှာလည်း ပါတယ်ဆိုတော့ လုံးဝကြီး …
ဒါပေမယ့် အဲဒီဟာက ခုအချိန်ထိ အသက်ဝင်နေပြီးတော့၊ ဒီအဖွဲ့တွေကြီးထွားလာ ပြီးတော့၊ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ အခုလိုမျိုးတွေ လုပ်နေတော့၊ ဥပဒေ ရှိသလားဆိုတော့လည်း ဥပဒေက မရှိဘူး။ ဒီလိုအဖွဲ့မျိုးက ခုလိုနှစ်ပေါင်းအကြာကြီး ဥပဒေ မရှိဘဲ ရှိနေ ခဲ့တာဆိုတော့လေ။ ဘယ်ကိစ္စမဆို ဥပဒေနဲ့မချည်နှောင်ထားရင် ပရမ်းပတာ ဖြစ်မှာပဲလေ။ ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ မြင်တာကတော့ စည်းစနစ်တကျ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ဘောင်နဲ့ ဥပဒေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ပြည်သူ့တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူ့ရဲ တပ်ဖွဲ့ရှိတာပဲလေ။ တပ်မတော်က ပြည်သူတွေအတွက်၊ နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တယ်။ နောက်ပြီး ပြည်သူရဲ့ အသက် အိုးအိမ် စည်းစိမ် ကို ဥပဒေနဲ့အညီ ကာကွယ်ပေးတဲ့ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ ရှိတယ်။ ဒီအဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုက စည်းနဲ့ ဘောင်နဲ့ ဥပဒေနဲ့အညီ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ ဆိုတော့ သူတို့ရှိနေတာပဲ၊ ကျွန်မတို့က တခြားအဖွဲ့တွေ မလိုအပ် ဘူးလေ။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံက ဥပဒေနဲ့ အုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံပဲ။ ဟုတ်တယ်မလား။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်မကတော့ ဒီပြည်သူ့စစ် ဆိုတဲ့ အဖွဲ့တွေဟာ မလိုအပ်တော့ဘူးလို့ ထင်တယ်။ ဒီဟာက ပြောရရင် ခေတ်နဲ့မညီတော့ဘူး။ ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ သွားနေတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုမှာ တော့ ဒီဟာမျိုးကို မထားသင့်တော့ဘူလို့ ကျွန်မမြင်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အခြေခံဥပဒေထဲမှာလည်း ပါတယ်ဆိုတော့ လုံးဝကြီး ဖျက်သိမ်းဖို့ တော့ ကျွန်မတို့မပြောလိုပါဘူး။ ဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုရင်လည်း အခြေခံဥပဒေကို ပြင်မှပဲ ရမယ့်သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်။
ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒေသတွေမှာတော့ ဒီပြည်သူ့စစ်ဆိုတာကို မထားသင့်တော့ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် ပြည်သူတွေနဲ့ ပွတ်တိုက်မှုတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ဒီပြည်သူ့စစ် ဆိုတာ …
ဒါပေမယ့်မလိုအပ်တဲ့ ဒေသတွေမှာတော့ မထားသင့်တော့ဘူး။ မလိုအပ်ရင်တော့ မထားသင့်ဘူးပေါ့နော်။ တစ်ဘက်ကလည်း သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး သေချာတိကျတဲ့ဥပဒေမရှိတော့ ဒီပြည်သူ့စစ်တွေကို ဘယ်လိုထိန်းကွပ်ကြမှာလဲ။ အဲဒီတော့ ဥပဒေနဲ့ ထိန်းကွပ်ဖို့လည်း လိုအပ်တယ်လေ။ မငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒေသတွေကျတော့ တပ်မတော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဖြစ်သွားပြီလေ။ ဒါကြောင့် အခြေခံဥပဒေမှာလည်း ပြည်သူ့စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပါနေတော့ ဖျက်သိမ်းဖို့ပြောရင် အခြေခံဥပဒေကို မသိဘူးလား၊ နားမလည် ဘူးလားဆိုပြီး ဖြစ်ဦးမယ်။ ဒါပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒေသတွေမှာတော့ ဒီပြည်သူ့စစ်ဆိုတာကို မထားသင့်တော့ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် ပြည်သူတွေနဲ့ ပွတ်တိုက်မှုတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ဒီပြည်သူ့စစ် ဆိုတာတွေကြောင့် တပ်မတော်ပဲ သိက္ခာကျမှာလေ။ ကျွန်မတို့ က တပ်မတော်အပေါ်မှာ ပြည်သူတွေက အထင်အမြင်လွဲမှားသွားမှာကိုလည်း မလိုချင်ပါဘူး။
ငြမ်းမီဒီယာ – လက်ရှိ နိုင်ငံမှာ တပ်မတော်ရော၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ပါ အင်အားနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ က သူ့ပုံစံနဲ့သူ ရှိနေတာဆိုတော့ ဒီပြည်သူ့စစ်တွေ ဆက်ရှိနေခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်ကို ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲ။
MKC – အကျိုးကနည်းပြီး အပြစ်ကများတယ်လို့ ကျွန်မအနေနဲ့သုံးသပ်တယ်။ အခုလက်ရှိ မြင်နေရတာက အဲဒီလိုမျိုး ဖြစ်နေတာ ပေါ့နော်။ အကျိုးထက် အပြစ်ကပိုများသလို ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ ဒါကိုတော့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြပေါ့။ ဟုတ်တယ်မလား။
ငြမ်းမီဒီယာ – အခုလို အချိန်ပေးဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Tags: တပ်မတော်, တိုင်းရင်းသား, ပြည်သူ့စစ်, လက်နက်ကိုင်
တိုင်းရင်းသားရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ ပေါ်လစီမရှိဘူး